स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दै नयाँशक्ति
You are at:Home»स्थानीय तह»स्थानीय तहको अधिवेशन गर्दै नयाँशक्ति
By HamroGorkha on	 January 27, 2019 स्थानीय तह
गोरखा । नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल गोरखा जिल्ला परिषदले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा अधिबेशन गर्ने भएको छ । माघ ११ गते बसेको तेस्रो बैठकले आगामी चैत्र मसान्तसम्म जिल्लाको ११ वटै स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गोरखा नगरपालिकामा नारायण खत्री र सिरानचोक गाउँपालिकामा दिपक बाबु भट्टलाइ संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीबाट धार्चे गाउँपालिका–३ को वडाध्यक्ष इन्द्र प्रसाद गुरुङलाइ वडाध्यक्ष पदबाट निष्काशनको लागी कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै नयाँशक्तिले भिमसेन थापा गाउँपालिका–१ मसेलको वृन्दावती मावि र गोरखा नगरपालिका–१० बिरेन्चोक स्थित रत्नराज्य माविका प्रअमाथि भएको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गर्दै दोषी माथि कारवाहीको माग पार्टीले गरेको छ । यता नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले ‘मध्य पहाडी लोकमार्ग जनसंवाद तथा जागरण यात्रा’ गर्ने भएको छ । पार्टीको संघिय परिषदको १५ औ वैठकद्धारा पारित पाँच महिना, पाँच काम, पाँच परिणामको सांगठनिक कार्ययोजनाको पुरक कार्यक्रमको रुपमा जागरण यात्रा गर्न लागिएको शनिवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ ।
पार्टी संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइ सहितको केन्द्रिय टोलिले पूर्वमा पाँचथरको चिवा भन्ज्याङ देखी पश्चिममा वैतडी झुलाघाट सम्मको १७६५ कि.मि. को मध्य पहाडी लोकमार्गमा यात्रा गर्न लागेको जिल्ला इन्चार्ज ज्ञानेन्द्र कुमालले बताए । पुष्पलाल लोकमार्गमा जनसंवाद तथा जागरणयात्रा गर्ने निर्णय बमोजिम गोरखाको तीन ठाउँमा कार्यक्रम हुने उनले जानकारी दिए । माघ २८ गते जिल्ला आइपुग्ने उक्त टोलीले २९ गते विहान जनप्रतिनिधीसँग छलफल गर्ने छ ।
सोही दिन आरुघाट र महटारमा कार्यक्रम गरेर पालुङटार फर्कने टोलीको योजना छ । माघ १ गते पालुङाटारका जनप्रतिनिधी सँग छलफल सँगै कार्यक्रम गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागी बिभिन्न समितिहरु गठन गरिएको छ ।
Previous Articleनेपाल नेत्र ज्योति संघमा श्रेष्ठ
Next Article बन्ने भयो इतिहास झल्काउने गोरखा गेट